Sacuudiga oo Xaalo laga dhoofiyay Berbera dib u soo celiyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Sacuudiga oo Xaalo laga dhoofiyay Berbera dib u soo celiyay
Sacuudiga oo Xaalo laga dhoofiyay Berbera dib u soo celiyay
Berbera (Halqaran.com) – Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumaysiga Somaliland, Mudane Siciid Sulub Maxamed ayaa ka hadlay Xoolo laga dhoofiyey Dekedda Berbera oo Sucuudiga dib u soo celiyey.
Wasiir Saciid Sulub ayaa sheegay in Sucuudiga iska Caadaystay inay Xoolaha loo dhoofiyo ay marmarka qaarkood iska soo celiyaan.
Sidoo kale, waxaa uu sheegay in ay waddan baaritaano ku aadan sababta keentay, islamarkaana aysan waxba ka jirin in Somaliland aysan dadaal ku bixin sidii xoolahaasi Sacuudiga looga codsan lahaa in ay aqbalaan.
“Maxaa lagala hadlayaa Sucuudiga Xooluhu way u furan yihiin oo muu joojin, Xanuun Xoolaha la soo celiyey ka muuqdaana ma jiro oo waanu baarnay. Dalalka wax dhoofiya ayaynu la mid nahay, intaas oo Markab baa ku soo noqday Jabuuti, intaas oo Markab baa ku soo noqday Suudaan, maxay kuwaa kaga duwan nahay Somaliland.” ayuu yiri Wasiirka.
Sacuudiga oo xoolo dib ugu soo celiyay Somaliland